रेबिजविरुद्धको भ्याक्सिन अभावको संकेत, २ लाख अपुग – Health Post Nepal
२०७५ चैत ११ गते ११:००
कुकुर, स्याललगायत जनावरको टोकाइबाट लाग्ने असाध्य रोग रेबिजको भ्याक्सिनको अभाव हुने देखिएको छ । समयमा भ्याक्सिन लगाउनेबाहेक रेबिज लागिसकेपछि मृत्यु टार्न सक्ने उपचारपद्धतिको विकास हालसम्म चिकित्साविज्ञानले गर्न सकेको छैन । यस्तो संवेदनशील र निर्विकल्प भ्याक्सिनको अभाव भएमा आकस्मिक रूपमा भवितव्यमा पर्ने जनावरको टोकाइका बिरामीको जीवनसँग खेलबाड हुने निश्चित छ ।
सरकारले देशभरका तोकिएका स्वास्थ्यसंस्थामा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको रेबिजको भ्याक्सिन बजेट अभावका कारण अपुग हुन थालेको स्वास्थ्यसेवा विभागअन्तर्गतको इपिडिमिओलोजी तथा रोगनियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार हाल कतिपय बिरामीले निजीस्तरमा भ्याक्सिन किनेरसमेत प्रयोग गरिरहेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा खरिद गरिएको रेबिजको भ्याक्सिनको मूल्य यस वर्ष ५० प्रतिशतले बढेर आएको तर बजेट भने साबिकै हिसाबले विनियोजन हुँदा समस्या आएको महाशाखाका उपस्वास्थ्य प्रशासक डा. समीर अधिकारी बताउँछन् । अघिल्लो वर्ष सरकारले करिब १० करोड रूपैयाँबराबरको रेबिजविरुद्धको भ्याक्सिन खरिद गरेको थियो । तर, अबको बजेटमा बढेको मूल्यको अनुपातमा सरकारले बजेट नबढाउने हो भने आगामी वर्ष भ्याक्सिन अभाव हुने अधिकारीको भनाइ छ ।
मानिसलाई कुकुर, स्याललगायत जनावरले टोकेमा रोबिज र सर्पले टोकेमा सर्पदंशविरुद्धको भ्याक्सिन तुरुन्त लगाउनुपर्ने हुन्छ । यी अवस्थामा समयमै सम्बन्धित रोगविरुद्धका भ्याक्सिन लगाउन नसकिएमा बिरामीको मुत्यु अवश्यंभावी हुन्छ । तर, नेपालमा यी दुवै रोगविरुद्धका भ्याक्सिनको उत्पादन हुँदैन । नेपाल सरकारले भारतबाट वार्षिक करिब ३ लाख रेबिजविरुद्धको भ्याक्सिन र करिब ३५ हजार सर्पदंशविरुद्धको भ्याक्सिन खरिद गर्ने गरेको महाशाखाको तथ्यांक छ ।
गत आर्थिक वर्षमा खरिद गरिएको रेबिजको भ्याक्सिनको मूल्य यस वर्ष ५० प्रतिशतले बढेर आएको तर बजेट भने साबिकै हिसाबले विनियोजन हुँदा समस्या आएको महाशाखाका उपस्वास्थ्य प्रशासक डा. समीर अधिकारी बताउँछन् । अघिल्लो वर्ष सरकारले करिब १० करोड रूपैयाँबराबरको रेबिजविरुद्धको भ्याक्सिन खरिद गरेको थियो । तर, अबको बजेटमा बढेको मूल्यको अनुपातमा सरकारले बजेट नबढाउने हो भने आगामी वर्ष भ्याक्सिन अभाव हुने अधिकारीको भनाइ छ । ‘सरकारले बजेट दिँदा अघिल्लो वर्षको खपतअनुसार दिइरहेको हुन्छ,’ डा. अधिकारीले भने, ‘तर, बजारमा औषधिको मूल्यमा भएको वृद्धि बजेटमा समावेश नगरिँदा भ्याक्सिन अभाव हुने देखिएको छ ।’
डा. अधिकारीका अनुसार रेबिजविरुद्धको एक भाइल भ्याक्सिनको मूल्य करिब ३ सय ८० रूपैयाँ पर्ने गरेको छ । एक बिरामीले जनावरको एकपटकको टोकाइमा ४ वा ५ पटक भ्याक्सिन लगाउनुपर्ने हुन्छ । टोकाइको प्रकृतिअनुसार छालाको हकमा एक महिनाभित्रमा ४ पटक र मासुको हकमा ५ पटक रेबिजविरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने गरिएको टेकु अस्पतालका सरुवारोग विशेषज्ञ डा. सेरबहादुर पुन बताउँछन् । पछिल्लो समयको मागबमोजिम अभाव हुन नदिन थप २ लाख भ्याक्सिन आवश्यक रहेको डा. अधिकारीको भनाइ छ । सर्पदंशको भ्याक्सिन भने हालसम्म अभाव नभएको महाशाखाले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले करिब २ करोडबराबरको सर्पदंशविरुद्धको भ्याक्सिन खरिद गरेको थियो । सर्पदंशविरुद्धको एक भ्याक्सिनको मूल्य करिब ७ सय पर्ने गरेको छ ।
मानिस आफैँमा रेबिज हुँदैन
कुनै न कुनै जनावरको टोकाइबाट सर्ने हो,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘हरेक टोकाइमा पनि रेबिज हुने हुँदैन । बहुला कुकुर तथा अन्य जनावरमा रेबिजका भाइरस भएका कारण उनीहरूको टोकाइले गर्दा मानिसमा सर्ने गर्छ ।’उनका अनुसार सबै जनावरको टोकाइमा रेबिजविरुद्धको भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ । ९९ प्रतिशत कुकुरको टोकाइबाट रेबिज हुने गर्छ । कुकुरलाई सघैँ पशुचिकित्सकको सल्लाहअनुसार भ्याक्सिन लगाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
इपिडिमिओलोजी तथा रोगनियन्त्रण महाशाखा